Hordhac: Bournemouth Vs Arsenal: Gunners Oo Isha Ku Haysa Ku Soo Laabashada Wadada Guusha Kadib Laba Kulan Oo Guul La,aan Ah Horyaalka – Kooxda.com
Home 2018 January Ingiriiska, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino Hordhac: Bournemouth Vs Arsenal: Gunners Oo Isha Ku Haysa Ku Soo Laabashada Wadada Guusha Kadib Laba Kulan Oo Guul La,aan Ah Horyaalka
Hordhac: Bournemouth Vs Arsenal: Gunners Oo Isha Ku Haysa Ku Soo Laabashada Wadada Guusha Kadib Laba Kulan Oo Guul La,aan Ah Horyaalka
Kooxda Arsenal ayaa u safri doonta garoonka kooxda Bournemouth ee Vitality Stadium iyada oo kula ciyaari doonta kulan ka tirsan horyaalka premier league todobaadkiisii 23-aad.
Gunners ayaa bilaa guul ah labadii kulan ee ugu dambeeyay horyaalka waxana ay si aad ah u doonayaan in ay ku soo laabtaan wadada guusha marka ay la ciyaarayaan kooxda Bournemouth.
Kooxda Arsene Wenger ayaa 5 dhibcood ka dambaysa kooxda Liverpool ee kaalinta 4-aad ku jirta sidaa darteed kama soo kabsan karaan dhibco kale oo ay lumiyaan.
Kulanka: Bournemouth Vs Arsenal
Tartanka: Premier Leageu
Wakhtiga: 4:30 Galabnimo
Arsenal ayaa 3 gool oo looga hor maray ka soo laabatay oo dhibic ka heshay garoonka Vitality Stadium wakhtigan oo kale xilli ciyaareedkii hore, waxana ay ahayd wakhtiga kaliya ee ay ka soo laabteen natiijo intaas leeh Premier league.
Bournemouth ayaa guul gaartay kulankoodii ugu dambeeyay premier league ee ay garoonkooda kula ciyaareen kooxda Everton laakiin laba kulan oo xiriir ah kumay badin tan iyo march 2017.
Kaliya Chelsea ayaa dhalisay goolal madaxa ah oo ka badan Arenal horyaalka premier league xilli ciyaareedkan iyada oo chelsea dhalisay 13 Madax halka Gunnners dhalisay 9 mada, halka ay kooxda Bournemouth tahay kooxda ugu badan ee goolasha madaxa ah laga dhaliyay 9 ayaa laga dhaliyay.
Kooxda Bournemouth ayaa laga badiyay 10 ka mid ah 13 kulan oo ay ciyaartay maalin Axad ah horyaalka premier league .